Misy Teny Iray Banga Tamin’ny Tantaran’ny Fandripahana Armeniana: Ny Rariny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2015 2:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, čeština , Nederlands, 日本語, Español
Aleppo Janoary 1920: mpitsoa-ponenana Armeniana ao amin'ny toera-pitsaboana maso Fanampiana Amerikana, sary avy amin'ny Oniversiten'i Michigan Expedition, George R. Swain, Ann Arbor, Michigan. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Nanamarika ny fahazato taonan'ny fandripahana ireo olona 1,5 tapitrisa nataon'ny manampahefana Tiorka ny Zoma 24 Aprily. Efa ho ny ampahatelon'ny mponina Armeniana nonina tao amin'ny fanjakana Ottoman tamin'zany fotoana izany no namoy ny ainy tamin'ny alalan'ny famonoana, famindra-toerana faobe ary ny mosary.
Tamin'ireo firenena 22 nankato ny fisian'ny fandripahana Armeniana tamin'ny fomba ofisialy, tao Amerika Latina ny dimy tamin'ireo: Arzantina, Bolivia, Shilia, Orogoay ary Venezoela.
Ny fivangongoan'ny Armeniana ampielezana betsaka indrindra ao Amerika Latina sady fahatelo lehibe indrindra manerantany dia fantatra faao Arzantina ary tombanana eo amin'ny olona anelanelan'ny 70.000 sy 135.000 eo ny isany, anisan'izany ny fianakavian'ilay mpanoratra gazety Arzantina Lala Toutonian (@LalaKarenina).
Nanakoako mihitsy aza androany ny tantaran'ny ray aman-dreniben'i @LalaKarenina, ny Fandripahana Armeniana.
Nitantara ny tantaran'ny ray aman-drenibeny tamin'ny Infojus Noticias, gazetin'ny Minisiteran'ny Fitsarana sy ny Zon'olombelona ao Arzantina i Toutonian, nilazalaza ny fomba nandehanan'izy ireo tany an-dafin’izao tontolo izao mba handositra ny famonoana sy hanomboka fiainam-baovao:
Nilaza ny renibe avy amin'ny raiko fa tsy nahatsapa akory ny ratran'ny bala tao amin'ny sandriny izy. Namikitra mafy ny zandriny faralahy izy raha nahatsikaritra rà volontsôkôlà matevina manarona ny tànany ny ny mpiray tampo aminy. Rehefa nitantara izany izy, nasehony ny holatra, niketrona izy, mahitsy ny fijeriny ary hentitra ny feony…
Nilaza ny fomba namonoana ny vadiny sy ny zanany kely teo imasony – manopy maitso sy mamirapitratra hatramin'ny andro namoizany ny ainy teo amin'ny faha-99 taona – ny raibe avy amin'ny reniko - ary koa ny fomba nahatafavoaka azy velona tao anaty tany an-tany ngazana ambanin'ny fasika raha nandalo ny Tiorka, misotro amanina ampondra andalam-pahafatesana, raha toa ka nianjera tahaka ny ravin-kazo maina ireo namana niara-dia taminy nandritra ny diaben'ny fahafatesana…
Nandà ny governemanta Tiorka fa nisy tokoa ny fandripahana. Manaiky izy fa nandritra ny Ady Lehibe I, marobe ireo Armenianina namoy ny ainy, saingy nilaza izy fa marobe ihany koa ny Tiorka maty, nanamafy izy fa samy tompon'antoka tamin'ny famonoana na ny andaniny na ny ankilany noho ny herisetra ara-poko sy teo amin'ny ankolafy izay nipoaka nandritra ny ady.
Notohizan'i Toutonian ny fitantarany:
Ireto ny voka-dratsin'ny fandripaham-bahoaka: fankahalana, lolompo, ratra, nenina, fihanaky ny nasionalisma, fitiavan-tanindrazana tafahoatra, fameloman-tena samirery tsy an-kiato. Fa eo ihany koa ny faniriana hihazona ny kolontsaina, ny fiteny, ny fivavahana, ny fahatsiarovana velona izay ezahan'ny vahoaka hopotehina, fafàna, ary hampanginina.
Satria isaky ny sary iray, isaky ny ankizy maty, isaky ny vehivavy voaolana, isaky ny ray aman-drenibe nasiana tombokavatsa, isaky ny lehilahy notapahan-tenda, nampahatsiahivina antsika ny antony tsy maintsy hanohizana ny fiainana.
Satria misy ny teny tsy ampy ao amin'ny tantaran'ny fandripaham-bahoaka Armeniana: ny rariny (fitsarana)